Sosialim-bahoaka… lehibe sy maika | NewsMada
Sosialim-bahoaka… lehibe sy maika
Par Taratra sur 10/01/2022
Lasa mahabe resaka tato ho ato ny amin’ny sosialim-bahoaka, indrindra ny fidangan’ny vidim-piainana mampikaikaika ny maro: tsy mety ho voafehy, tsy hita be ihany fa miovaova isaky ny mihetsika… Vokatry ny fitotonganana eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena eo amin’ny toekarena, ny varotra, ny fitaterana… Eo ihany koa ny fisian’ny mpanararaotra, na eto an-toerana na any ivelany. Hanao ahoana?
Laingalainga, mbola mampanahy sy mampatahotra be ihany ny amin’izany amin’izao fotoana. Tsia, tsy famendrofendroana na fampitahorana, sanatria. Tsy maintsy atrehina ny zava-misy. Tsy mbola voafehy tanteraka aloha ny fihanaky ny valanaretina Covid-19, tonga any amin’ny karazany dimy na enina amin’izao. Nefa ny ady amin’izay no mahavoadona mafy ny sehatry ny toekarena, varotra, fitaterana… Hanao ahoana?
Mampanontany tena hatrany izay hiseho sy ny hoavy, fa ny fisian’ny valanaretina Covid-19 no manova izay rehetra miseho sy atao eo amin’izao tontolo izao: fomba fihariana, fomba fifandraisana, fomba fiaina… Tsia, tsy andeha hanamarinan-tena amin’izay mety ho fahavoazana sy tsy fahombiazana amin’izay atao rehetra ny fisian’ny valanaretina. Tsy maintsy atrehina ny zava-misy sy izay iainana andavanandro.
Ho laharam-pahamehana amin’izay ny sosialim-bahoaka? Ankoatra ny dona maneran-tany noho ny valanaretina, tarazo ratsy hatramin’izay ny fahantram-bahoaka. Hisy amin’izay ny asa sy vokatra mivaingana, hahahenika ny rehetra, haharitra… Mety mby ao an-tsain’ny maro avy hatrany amin’izany, ohatra, ny fampihenana ny vidin’ny entana ilaina andavanandro, ny fanatobahana izany eny an-tsena, ny fizarana karazana fanampiana…
Na izany aza, eo ny fitenenana malaza hoe: raha misy mangataka trondro, aleo omena haranjono. Tena ilaina, ohatra, ny famoronana asa, ny fanamorana ny fahazoana mamorona asa amin’ny alalan’ny fampisamboram-bola ara-drariny, ny fisian’ny politika mazava momba ny sandam-bola… Zava-dehibe sy maika ny fampitomboana ny fahafaha-mividy eo amin’ny tsirairay, na eo tsy ny fampihenana vidin’entana?